Mandray ny maripanan’i Hong Kong: Hanao ahoana ny hoavin’ny hetsika ao amin’ny fanoherana? · Global Voices teny Malagasy
Mandray ny maripanan'i Hong Kong: Hanao ahoana ny hoavin'ny hetsika ao amin'ny fanoherana?
Mitombo ny famoretana, mihalava koa ny 'lisitra hetsika azo atao'
Voadika ny 21 Jolay 2020 5:02 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, عربي, Deutsch, русский, Français, Español, English
Hetsika Watery tao Hong Kong. Saripika avy amin'ny Stand News.
Herintaona ankehitriny ny hetsi-panoherana fandroahana olona hody any Shina avy ao Hong Kong. Nangonin'ny sehatra media an-tserasera ao Hong Kong antsoina hoe Stand News ny andian-dahatsoatra itarafana ilay hetsika fanoherana. Navokan'ny Global Voices ny endrika nasiam-panovana ireny lahatsoratra araka ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny votoaty ireny. Ny endrika orizinaly shinoa amin'ny lahatsoratra eto ambany dia nosoratan'i Francis Lee, Profesora ao amin'ny Sekolin'ny Fanoratan-Gazety sy Fifandraisana ao amin'ny Oniversite Shinoa ao Hong Kong.
Manamarika ny fahaherintaonan'ny hetsika fanoherana ny fandroahana ny olona hody any Shina avy ao Hong Kong ny volana jona.
Hatramin'ny niparitahan'ny COVID-19 tamin'ny faran'ny janoary, noraran'ny polisin'i Hong Kong izay rehetra famoriam-bahoaka ankalamanjana, amin'ny anaran'ny fitsipika ifehezana ny aretina fantatra amin'ny hoe Fivoriam-Bondrona Voarara.
Nataon'ilay fitsipika mihitsy izay tsy ahafahan'ny fikambanana manatontosa famoriam-bahoaka. Ahiana hitombo kosa anefa mandritra izany fotoana izany ny fihetsiketsehana fanoherana ataon'olo-tokana eny an-dalambe, raha mikarakara lalao manova ny lalàm-pilaminam-pirenena amin'i Hong Kong i Beijing.
Amin'izao fotoana ny fihetsiketseham-panoherana kely kokoa noho ny tamin'ny jona 2019, tamin'ny fotoana olona an'hetsiny no mirotsaka isan'andro eny an-dalambe ao anatin'ny fanehoam-panoherana governemanta goavana indrindra teo amin'ny tantara.
Saingy asehon'ny fitsapan-kevitra maro fa tsy misy fiovana ny fahatezeran'ny vahoakan'i Hong Kong amin'ny polisy sy ny manampahefana ao amin'ny governemanta.
Fitsapan-kevitra notarihan'ny Foiben'ny Fifandraisana sy Fitopimaso ny Hevi-Bahoaka* [CCPOS] ao amin'ny Oniversite Shinoa ao Hong Kong tamin'ny faramparan'ny volana mey no nampiseho fa 45,8 isanjaton'ny nanontaniana no mahatsapa fa zerô ny fitokisany ny governemanta ary 47,5 isanjato no mahatsapa ao anatiny fa zerô ny fitokisany ny polisy.
Ho fanoherana ilay lalànam-piarovam-pirenena mampiady hevitra ampiharina ankaterena, mahatratra 41,4 isanjato no maneho zerô fahafaham-po amin'ny fametrahana ny “Firenena Tokana Roa Rafitra” ao Hong Kong.
Mihoatra ny 60 isanjato amin'ireo nanontaniana no manohitra ny fanapahan-kevitr'i Beijing hamelona ny lalàna vaovao amin'ny fiarovam-pirenena, tsy mandalo amin'ny fanaovan-dalànan'i Hong Kong. Mifanipaka tanteraka amin'ny filazana nataon'i Carrie Lam, Lehiben'ny Mpanatanteraka ao Hong Kong, tamin'ny 16 jona milaza fa vitsy dia vitsy no manohitra ity lalàna ity io tsikaritra io.
Nanontaniana ihany koa ireo nanontaniana tamin'ny fitsapan-kevitra raha manohana na manohitra ny hetsika fanoherana ny fandroahana olona hody any Shina, ka tsy jerena ny endrika na ny paikady ho amin'izany. Hita ao amin'ny fitsapan-kevitra fa 39,1 isanjato no manohana ny hetsika ary 39,2 isanjato no manohitra. Milaza ireo mpanohana ny mpitondra pro-Shina fa manondro ny fahaverezam-panohanana ny hetsika izany vokatra izany. Mety tsy hitaratra ny zavamisy anefa izany fomba fandika izany.
Ara-tantara, efa nasehon'ny fakan-kevitra fa manodidina ny 20-25 isanjato amin'ny olompirenena ao Hong Kong no tsy nanohana ny hetsika fanoherana ny fandroahana olona hody any Shina tamin'ny voalohany. Vao maika nampisy tsindry tamin'ny toekarenan'ny tanàna ny areti-mandringana COVID-19, ary nampalemy kokoa ny antso hanohitra.
Raha ao an-tsaina izany, dia tsy zava-miavaka ny nahitana ny tsy-fanohanan'ny roa ampahadimy matanjaka amin'ny mpamaly fitsapan-kevitra ny fihetsiketseham-panoherana mbola naharitra am-bolana maro tao an-tanàna.
Ity valiny ity dia afa-mitaha amin'ny fitsapan-kevitra natao tamin'ny Novambra 2014, roa volana taorian'ny nanombohana ny hetsika elo pro-demaokrasia.
Izany fitsapan-kevitra izany no nahitana ny 70 isanjaton'ny nanontaniana nanohana ny famaranana ilay hetsika sit-in am-pilaminana nataon'olona maro.
Ahitana fahasamihafana goavana raha tsinjaraina araka ny vondron-taona ny valiny hita amin'ny fitsapan-kevitra nataon'ny CCPOS.
Eo amin'ireo anatin'ny 15-24 taona, ny tahan'ny fanohanana hanohizana ny hetsika fanoherana ny fandroahana olona ho any Shina dia 71,9 isanjato. Amin'ny sokajin-taona manaraka ao anatin'ny 25-39 taona, midina mankany amin'ny 51,9 isanjato izany fanohanana izany. Mahazo mpanohana 35,6 monja ny hetsika ho an'ny sokajin-taona 40-59 ary mahazo 20,3 isanjato ho an'ireo 60 taona no mihoatra.
Ho an'ireo manohitra ny fanohizana ny hetsika fanoherana fandroahana olona hody any Shina kosa, resaka tetipanorona kokoa no antony hanoherana fa tsy ilay hetsika no tsy tiana.
Ny fanehoan-kevitra any amin'ireo sehatra media sosialy isan-karazany tao anatin'ny herinandro faramparany no nanasongadina fisalasalàna fa mety hiteraka fiantraikany tsara ny hetsika ao anatin'izao tontolo famoretana ara-politika izao, rehefa afa-mampiasa hery araka izay ilainy ny polisy misahana ny rotaka hifehezana sy hisamborana mpanao fihetsiketsehana.
Matetika ireny fanehoan-kevitra ireny manoritra fa amin'izao fahavononan'i Beijing handrava ny ‘Firenena Iray, Rafitra Roa’ izao, ny hoavin'i Hong Kong dia miankina amin'ny seho ara-diplaomatika ifanaovan'i Etazonia sy i Shina, fa tsy amin'ny hetsika eny an-dalambe.
Miharihary izany fandrefesana sanda sy fiantraika izany raha jerena ny faneren'i Beijing hametraka ny lalànan'ny fiarovam-pirenena amin'i Hong Kong.
Na dia manahy aza ny 63,5 tamin'ny nanontaniana fa mety hanimba ny fahafahana sy ny zon'ny olom-pirenena ao Hong Kong ny lalàna, dia ny 59 isanjato tamin'ireo nanontaniana ireo ihany no manohana ny hanohizana ny hetsika fanoherana fandroahana olona ho any Shina, raha manohitra izay mety hanohizana izay rehetra hetsika manaraka ny 15,1 isanjato.
Fanitarana ny ‘lisitry ny fomba fanoherana’
Na dia nametra ny halehiben'ny hetsi-panoherana aza ny famerana nampiharina mandritra ny areti-mandringana COVID-19, dia tsy hampitsahatra tanteraka izany. Nanomboka tamin'ny fiafaran'ny volana avrily, maromaro ny “hiram-panoherana” tselatra nipongatra tany amin'ny tsenambarotra mihaja.
Ambonin'izany, nisy ny hetsi-panoherana kely tanterahana isambolana ho fahatsiarovana ny trangam-panafihana tao Yuen Long [mg] (21 Jolay 2019) sy ny fanafihana nitranga tao amin'ny gara Prince Edward (31 Aogositra 2019) — toe-javatra roa izany manapongatra ny fampiasan-kery tafahoatra nataon'ny polisy tamin'ny mpanao fihetsiketsehana.
Tamin'ny 24 mey, an'arivony no nandray anjara tamin'ny fihaonana tsy ara-dalàna ho fanoherana ny fanapahan-kevitr'i Beijing hampihatra ny lalànan'ny fiarovam-pirenena ao amin'ny tanàna — hetsi-panoherana lehibe voalohany hatramin'ny nampiharana ny famerana noho ny COVID-19.
Avy eo, tamin'ny 4 jona, an'aliny no nanatevin-daharana hanatontosa fiaretan-tory fandrehetana labozia tao Victoria Park sy tany amin'ireo distrika ampolony hafa manerana an'i Hong Kong. Tamin'ity taona ity no voalohany nametrahan'ny manampahefana ny fandrehetan-dabozia ho tsy ara-dalàna tamin'ny fanononana ny fanarahamaso ho famerana ny aretina.
Farany, tamin'ny 9 jona, mpanao fihetsiketsehana an'arivony no nivory tao amin'ny distrika afovoany hanamarika ny tsingerintaona voalohany nisian'ny fihetsiketsehana nahazoana iray tapitrisa ho fanoherana ny volavolan-dalàna fandroahana olona ho any Shina.
Nitranga ireny hetsika ireny na dia misy aza ny mety fisamborana noho ny fandraisana anjara tamin'ny fivoriana tsy ara-dalàna.
Efa nisy ny fisalasalana ny amin'ny haharetan'ny hetsika fanoherana ny fandroahana olona ho any Shina raha mbola tsy ampy iray volana ny hetsi-panoherana.
Saingy rehefa nivelatra ny famoretana ireo mpanao fihetsiketsehana, dia niitatra toy izany ihany koa ny lisitry ny fomba fanoherana.
Avy eo, ny hetsika goavana tamin'ny jona no nanome lalana ireo fihaonana eny anivon'ny distrika sy ny fananganana ny Rindrina Lennon manerana an'i Hong Kong nandritra ny volana Jolay, narahan'ny sit-in milamina tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena an'ny tanàna sy ny fitsanganan'ny tohivakan'olombelona nanerana ny tanàna tamin'ny Aogositra 2019 [mg].
Rehefa nisokatra indray ny sekoly tamin'ny Septambra 2019, dia nivadika ho toeram-panoherana ny toby an-tsekoly [mg] sy ireo tsenambarotra mihaja.
Taorian'ny fandresen'ny fiaraha-mientana pro-demaokratika tamin'ny fifidianana anivon'ny distrika tamin'ny volana Novambra, nanomboka nanandrateny ny mpanohana ny hetsika amin'ny hevitra “faribolana ara-toekarena mavo”, izay anaovan'ny vahoaka ankivy ny fiharian'ireo mpanohana ny tandapa, raha mahazo ny fanohanam-bahoaka ny fiharian'ny “mavo”, na mpanohana ny hetsika.
Efa niantso ny hananganana vondrona arakasa sy sendikàn'asa ihany koa ny mpanohana hiomanana amin'ny fitokonana faobe hoavy.
Izay no heverina ho lalan-koavin'i hetsika, izay hitsofohan'ny fifaharana ao anatin'ny fiainana andavanandro, ka hiatrehan'ny mpitondra lazon'ady maharitra.
Ary tsy haharitra mandrakizay ihany koa ny famerana hifehezana ny aretina, ary tsy azo ahifika fotsiny izao ihany koa ny mety ahitana indray an'i Hong Kong hisian'ny hetsika goavana — na dia mihabetsaka aza ny vato asakana amin'ny hetsika iraisana.
* Filazana: Ny mpanoratra ity lahatsoratra ity, ny Dr. Francis Lee, no mpandrindra voalohany ny fitsapan-kevitra CCPOS, izay manontany olona eo anelanelan'ny 800-1200 isa isam-bolana hatramin'ny volana jona tamin'ny herintaona.